Ku celi Youtube - Si fudud u boobaan fiidiyowyada Youtube - Dhegeyso muusikada adigoo aan kala go 'lahayn
Fiiri oo Ku Soo celi Muuqaallada Youtube-ka
Dib ugu soo celi fiidiyowyada Youtube adiga oo aan riix-riixeynin
U fiirso fiidiyowyada YouTube-ka habka ugu fudud. Adigoo isticmaalaya YouTube Loop waxaad ku celin kartaa fiidiyowga buuxa ama waxaad dooran kartaa qeyb ka mid ah, ka raadin kartaa YouTube, bilaabi kartaa fiidiyowyo badan isla waqti isku mid ah!
Raadi ama samee Youtube Ku-celi
Ku soo celi fiidiyowyada YouTube-ka ee buuxa ama qayb ahaan adoo isticmaalaya YouTube Loop
Repeater-ka Youtube-ka wuxuu u oggolaanayaa qof walba inuu rogo fiidiyowyada YouTube-ka ama qaybo fiidiyoow ah oo waqtiyo leh iyadoo dhowr taabsi oo jiirka ah ah. Si aan dhamaadka lahayn ku soo celi fiidiyowyada muusikada, muuqaallada fiidiyowga xiisaha leh, ama fiidiyowyada muuqaalka leh sida dab-damiska ama aquariumyada, oo la wadaag asxaabtaada!
Sida loo dhejiyo fiidiyowga YouTube-ka ee ku celinta ah
Goorma ayuu waxtar leeyahay fiidiyowga YouTube-ka ee loop aan xad lahayn
∞ Markaad daawato fiidiyowga YouTube-ka waxbarida ah oo aad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid qayb ka mid ah mar labaad iyo mar labaad.
∞ Markaad maqashid muusig loo qabatimay inay tahay inaad dhageysato mar labaad iyo mar labaad iyo mar labaad ...
∞ Markii ay tahay inaad daawato fiidiyowgaas xiisaha leh ee 1000ka jeer adiga oo aan wax talaabo ah ku qaadin aaladda.
∞ Markaad rabto inaad daawato fiidiyowyada YouTube-ka adigoon xayeysiin lahayn.
Soo celi Youtube
Hel Button ku soo celi badhanka Youtube, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge.
∞ Ku celi Youtube ← U jiid tan meesha galka fariimahaaga
Miyaanan arkin calaamadda bogga Saxaafadda Shift+Ctrl+B
❝Qoraalkani wuxuu kaa caawinayaa inaad si toos ah u xajisid fiidiyowyada YouTube-ka.❞
Adigoo isticmaalaya YouTube Loop waad awoodid
Ku soo celi, Jar oo Wareeg
Fiiri dhammaan fiidiyowyada YouTube-ka ama qaybo ka mid ah ku dheji mar kale, ka dib la wadaaga asxaabtaada!
Ku soo celi fiidiyowyada YouTube si otomaatig ah (ama qaybo ka mid ah, arrinkaas)
Fiiri fiidiyaha aad ugu jeceshahay YouTube-ka marar badan adiga oo aan riix-riixeynin.
Dalag, Goy Loop aan xad lahayn
Samee Loop ah, beero qaybta aad ugu jeceshahay fiidiyowga ka dibna si buuxda u ciyaar ama qayb ka mid ah fiidiyowyada YouTube ee loop aan xad lahayn.
Habeeji waqtiga loop (bilow / dhamaad)
Taageerida cabbirada waqtiga YouTube-ka.
Abuur liiska Liistadaada adigoon galin.
Ku kaydso ama soo celiyo liistada liiska.
Youtube ku celi liiska ciyaarta, isku shaandhayn ama dib u rogo liiska Youtube-ka.
Xakamee fiidiyowyada YouTube-ka ee xamuulka ah.
Si otomaatig ah Shaashad buuxda
Ku daawo Youtube muuqaal buuxa oo aan lahayn xayeysiis kumbuyuutar iyo telefoon casri ah.
Si otomaatig ah ayey u cabbirtaa si loo waafajiyo shaashadda qalabka
Xawaare ama Si tartiib Ah U Soco
Hoos u dhig heesaha Youtube ama xawaaraha fiidiyowyada.
Kudar badhanka ciyaarta ciyaarta.
Wax ka beddel cinwaanka intaadan la wadaagin.
Khibrad adeegsadeha la hagaajiyay
U raadsato fiidiyowyada YouTube si habsami leh.
No xayeysiis aan dhib lahayn.
Taageer Dhammaan Meelaha La Doonayo
Waxaad u adeegsan kartaa YouTube Looper meel kasta oo aad jeceshahay sida qalabka Windows, Linux OS, mashiinka Mac, Chromebook, Android, ama iPhone, iPad, Smart TV.
Dhammaan waa bilaash
Degdeg ah oo bilaash ah xanaaqna ma leh.
Gabi ahaanba waa adeeg bilaash ah oo khadka tooska ah lagu isticmaalo.
Xisaab ma leh, wax la soo dejinayo, kaliya muusig.
Si sahlan u boobaan fiidiyowyada Youtube - Dhageyso muusigga adigoo aan kala go 'lahayn
Sidee si otomatik ah loogu soo celiyaa Fiidiyeyaasha YouTube-ka
Waxaa jira qaabab looga gudbi karo xayiraadaha soo noqnoqda ee YouTube
Raadi fiidiyaha aad ugu jeceshahay ama gali URL-ga YouTube (ama Aqoonsiga fiidiyowga) fiidiyowga aad rabto inaad ku celiso santuuqa gelinta ee kore. Ama isticmaal tabaha Youtube ku celceliska hoosta.
Bedel waraaqda t by warqad x ee bogga Youtube ka dibna riix Enter. Fiidiyahaaga ayaa si isdaba joog ah ugu soo laaban doona.
- Fiidiyow joogto ah ayaa laga helay Youtube
- Nooca Mobiilka
- Iskuxirka dalka (uk, jp, ...)
- URL Gaaban
Sida loo Sameeyo Fiidiyowga YouTube-ka ee Ciyaarta si joogto ah u socota
YouXube wuxuu kuu oggolaanayaa inaad abuurto Loop si aad ugu celiso fiidiyow buuxa ama qayb gaar ah oo ka mid ah. Si aad u abuurto Loop ah waxaad dooran kartaa fiidiyaha mid ka mid ah qaababka soo socda:
Tallaabada koowaad: Dooro fiidiyaha
Ka socota URL
Si aad ugu celiso fiidiyowyada YouTube, si fudud ku dheji URL-ga YouTube-ka ee aagga raadinta.
Hadaadan hubin fiidiyowga aad rabtid inaad fiiriso, waxaad raadin kartaa fiidiyowyada YouTube-ka. Bogga xiga waxaad ka heli doontaa natiijooyinka raadinta oo aad ka dooran karto fiidiyaha aad ugu jeceshahay.
Tallaabada labaad: Jar
Fiiri fiidiyowyada Youtube-ka inta udhaxeysa waqtiyada
Xulo bilow / dhamaad
Mar alla markii aad doorato fiidiyowgaaga, waad beddeli kartaa wakhtiyada bilowga iyo dhammaadka. Si fudud ugu jiid tilmaamaha bilowga iyo dhammeystirka waqtiyada aad jeclaan laheyd. Hadda waad ku celin kartaa fiidyowyada aad ugu jeceshahay YouTube-ka.
Sida caadiga ah, wakhtiyada bilowga / dhammeysiga ayaa ah waqtiyada bilowga / dhammeysiga fiidiyowga.
Tilaabada saddexaad: Habee cinwaanka fiidiyowga
Ku magacow loop
Waxaad sidoo kale magacaabi kartaa Loop wax alla wixii aad rabto. Fur fur badbaado ah, bedesho magaca oo guji badhanka Badbaadi.
Tilaabada afaraad: Abaabul suugaanta fiidiyowga ah
La wadaag aalad
Waxaad kula wadaagi kartaa fiidyowyadaada YouTube-ka ka go'ay ee warbaahinta bulshada aad jeceshahay sida: Facebook, Twitter, Pinterest, email, iyo xitaa WhatsApp ama fariin qoraal ah.
Kahor intaadan wadaagin, u samee muuqaal muuqaal ah Youtube thumbnail muuqaal ah si aad dadka uga dhigto mid xiiso leh.
Si aad u adeegsato YouTube Loop waa inaad haysataa biraawsar HTML5 ah.
Halkan Ka Soo hel Su'aalahaaga iyo Jawaabahaaga - Sidee Loo Loogu Raadiyaa Youtube-ka Fiidiyowyada ah?
+ Waa maxay YouTube Loop?
Waa aalad websaydh ah oo ku ciyaaraya fiidiyowyada YouTube ee loop aan xad lahayn, maxaa loola jeedaa: fiidiyowgu si toos ah ayuu u bilaabmaa si toos ah iyada oo aan wax faragelin ah la sameynaynin ka dib markuu soo gaaro dhamaadka.
+ Sidee dib loogu soo celiyaa ama loopoorayaa?
Helitaanka fiidiyowga YouTube-ka si loogu celceliyo loop wuxuu u muuqan karaa sidii hawl aasaasi ah, laakiin waxaa la yaab leh inay adag tahay in la qabto oo ka daaya daawadayaasha badan jahwareer.
Nasiib wanaagse, waxaa jira seddex qaab oo si fudud oo fudud oo loogu gogol xaarayo fiidiyowga muusikada ee YouTube-ka aad jeceshahay ama filimka trailer, dhammaantood gabi ahaanba waa lacag la’aan waxayna la shaqeeyaan dhammaan aaladaha ay ka midka yihiin iPhone iyo Android smart iyo Windows, Mac, iyo kumbuyuutarrada Linux.
• Habka 1. YouTube-ka: midig-riix daaqada fiidiyowga oo guji Loop
• Habka 2. On YouXube:
- Raadi fiidiyow adiga oo adeegsanaya sanduuqa gelinta ee kor ku yaal bogga, ka dibna dooro hal fiidiyow liiska natiijada.
- Nuqul URL-ga fiidiyowga YouTube-ka ee aad jeclaan laheyd inaad ku dhufato oo URL-ga fiidiyowga YouTube geli sanduuqa gelinta ee kore ee bogga ka dibna riix astaanta 'infinity' ∞
- Nuqul Aqoonsiga fiidiyowga ee aad jeclaan laheyd inaad ku dhufato oo aad ku dhejiso Aqoonsiga fiidiyowga YouTube-ka sanduuqa gelinta ee dusha sare ee bogga ka dibna riix astaanta 'infinity' ∞
• Habka 3: Ku rakib barnaamijka Music Music Bilaashka ah iPhone, iPad, ama iPod taabashada (waxaa sidoo kale jira YouTube ku soo celinta qalabka Android).
+ Sidee looga Raadiyaa Muuqaalada YouTube-ka ee Bog Fure ah?
Ma jiraa hab lagu daawado fiidiyeyaasha YouTube-ka ee xawaaraha ka sarreeya 2x?
⓵ Waqtigaan, YouTube kaliya waxay dardar gelineysaa dib u soo celinta fiidiyoowga 2 jeer.
⓶ Midig u riix aagga fiidiyowga, ama riix-riix dheer haddii aad isticmaaleysid shaashad taabasho.
⓷ Ka xulo qaybta 'liif' menu.
Laga soo bilaabo halkan, fiidiyowgu wuxuu si isdaba joog ah ugudbin doonaa ilaa aad ka baabi'inaysid muujinta loop-ka, kaas oo aad ku sameyn kartid adoo si fudud u celinaya tillaabooyinka kore si aad u kala xulato ikhtiyaarka loop, ama adoo dib u cusbooneysiinaya bogga.
+ Sidee looqaayaa fiidiyowyada YouTube-ka ee iPhone ama iPad adigoon xirinin dalabka?
On desktop ama computer laptop, YouTube wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si otomaatig ah ugu celiso fiidiyow aad daawaneyso. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira adeegyo bilaash ah, adeegyo dhinac saddexaad ah oo kaa caawin kara dib-u-celinta fiidiyowyada.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso qaab kale oo aad ku boobaysid fiidiyowyada YouTube-ka kumbuyuutar ama waxaad isticmaaleysaa aalad sida taleefanka casriga ah oo aan muujinin ikhtiyaarka menu qarsoon, websaydhka YouXube waa ikhtiyaar fiican.
YouXube waa degel bilaash ah oo u oggolaanaya qofkasta inuu bilaabo inuu ku soo celiyo muuqaal YouTube ah si fudud adoo galaya URL-ga fiidiyowga goobta raadinta. Waxa ugu fiican, tan waxaa lagu samayn karaa bog kasta oo biraawsar qalab kasta.
+ Sideen u nuqul oo u dhajiyaa URL-yada YouTube-ka aaladda mobilada?
Kombuyuutar, waxaad si dhakhso ah ugu nuqulsan kartaa isku xirka xarkaha furaha Ctrl + C oo ku dheji xiriiriyaha furaha furaha ah Ctrl + V.
Qalabka mobilada, riix oo hay ka dibna dooro ikhtiyaarka nuqul ama koollada ah.
+ Boggan ma yahay wehelka YouTube?
Boggan kuma xirna YouTube.
Boggan ma ahan wehelka Youtube mana ahan habka rasmiga ah ee loogu ciyaaro fiidiyowyada YouTube-ka ee soo noqnoqda, kaliya waa qeyb saddexaad.
+ Ma aaminbaa in la isticmaalo adeegan soo-celinta YouTube-ka ah?
Nabdoonaanta ayaa ah ahmiyadeena koowaad, sidaas oo ay tahay dhammaan taraafikada xogta websaydhkan ayaa ah mid kujira SSL. Nidaamkan shabakadda ee aaminka ah, xogtaada ayaa laga ilaaliyaa marin u helidda dhinac saddexaad.
+ Miyaad murkineysaa fiidiyowga YouTube-ka, adigoo daawanaya?
Dib u bilaw biraawsarkaaga.
Hubi isticmaalka CPU ee kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga ama kiniinigaaga. Haddii aad aragto inuu aad u sarreeyo (in ka badan 80%) iskuday inaad dirto qaar ka mid ah hawlgallada, ama dib u bilow qalabkaaga.
Hadday suurta gal tahay inaad ugu bedesho tayo hooseysa fiidiyoowga YouTube (480p ama ka hoose).
+Sidee loo Daawadaa Muuqaallada YouTube-ka ee Dhaqdhaqaaqa Quncinta ama Dhaqdhaqaaqa Degdegga ah?
Sidee loo Badalaa xawaaraha ciyaarta ee fiidiyowga ee Youtube-ka?
Fur fidiyow kasta oo YouTube ah biraawsarkaaga
U fiirso midigta hoose ee ciyaartoyga qaab dhismeedka cog (oo waxaa laga yaabaa inuu dhihi karo HD korkeeda)
Guji ikhtiyaarka xawaaraha (waa inuu caadi ku ahaadaa mid caadi ah)
Xullo xawaaraha dib-u-ciyaaristaada
Dhaqdhaqaaq tartiib ah: 0.25, 0.5, 0.75
Kordhin Xawaaraha: 1.25, 1.5, 2
Bedel ahaan, waxaad ku furi kartaa fiidiyaha fiidiyowga 'Youxube', kaasoo leh laba badhan oo kor u qaadaya ama yaraanaya xawaaraha ku jira xakamaynta.
Tani waxay sidoo kale jawaab u tahay su'aalaha qaarkood oo la mid ah.
Sida loo dedejiyo ama loo yareeyo Muuqaallada YouTube-ka?
Sidee loo daawadaa fiidiyowyada YouTube xawaare dhakhso leh?
Ma u kordhin karnaa xulashada xawaaraha dib ugu soo laabashada?
Sida loo ciyaaro Fiidiyowyada YouTube-ka ee Dhaqdhaqaaqa Quncinta ama Dhaqdhaqaaqa Degdegga ah?
+ Sidee loo Dardar geliyaa Fiidiyeyaasha YouTube (2x, 3x iyo wixii ka badan 4x)?
Waqtigaan, YouTube kaliya waxay dardar gelineysaa dib u soo celinta fiidiyoowga 2 jeer.
+ Sidee loo Beddelaa Xawaaraha Dib U Soocelinta YouTube-ka ee Android iyo iPhone?
Kahor intaanan bilaabin, hubi inaad tagto App Store ama Google Play oo aad cusboonaysiiso nooca ugu dambeeyay ee barnaamijka YouTube-ka.
Fur barnaamij kasta oo fiidiyoow ah oo ah YouTube ka mid ah barnaamijka
Taabo fiidiyowga si aad u aragto dhammaan badhamada shaashadda laga dhex arki karo
Taabo 3 dhibic ee geeska kore ee midig ee shaashaddaada. Kani wuxuu furi doonaa xirmo fiidiyow ah.
Liiska dejinta, riix Xawaaraha Dib ugu soo Laabashada. Waa in caadi loo dejiyaa
Kaliya isku cadaw xawaaraha aad rabto, oo dhamaantiin waad go'antahay.
Markaad ku jirto taleefankaaga gacanta ama iPhone, haddii aad dooratid inaad ku ciyaarto fiidiyowyada YouTube-ka taleefanka moobilka (m.youtube.com) halkii aad ka isticmaali lahayd barnaamijka taleefanka gacanta ee asaliga ah, markaa waad beddeli kartaa qaybta YouTube-ka ee noqo YouXube.
+ Sidee looga boobaayaa fiidiyowga youtube-ka meel gaar ah?
Sideed ugudbin kartaa fiidiyaha Youtube inta udhaxeysa waqtiyada?
Ku jiid boodhadhka Youtube Reega si aad ugusoo celiso qayb kamida fiidiyowga.
+ Sidee looga boobayaa liiska cayaarta Youtube-ka ee mobilada?
Fur furistaada waxkasta oo YouTube ah biraawsarkaaga
Beddel qaybta YouTube-ka ee noqo YouXube adiguna dhamaantiin baa hagaagsan.
Aalad fudud oo fiidiyow ah oo fiidiyow ah ah oo loogu talagalay YouTube-ka
Abuuritaanka Loop waligiis ma fududaan! Waxay awood u siisaa ku celcelinta otomaatig ee fiidiyowga YouTube ama qeyb ka mid ah ...
App weyn, loops waa caawinta ugu fiican barashada qaybo ka mid ah heesaha si loo ciyaaro ama loo heesto.
Cilmiga cilmu-nafsiga hadalka, London
Kaliya waa waxa aan raadinayay inaan ku celiyo qaybo ka mid ah muusikada sida aan u wada ciyaaro si aan u tababaro. Muuqaalka la wadaagayo wuxuu ahaan doonaa mid wanaagsan in lala wadaago qaybaha fiidiyaha kuwa kale ee arday kasta / koox koox / naadi kooxeed.
Macallinka Dugsiga Sare, Paris
Waxaan u adeegsadaa barnaamijkan si aan ugu abuuro liisaska liiska jimicsiga aan ku sameeyo. Waad ku celin kartaa hal track ama dooran kartaa auto-ciyaar kuu ogolaaneysa inaad dhageysato dhammaan muusikada liiska ku jira. Codsi lagu kalsoonaan karo.
Falanqeeyaha Amniga Macluumaadka, Silicon Valley
Waan jeclahay sida aad u abuuri karto loop inta u dhaxaysa waqtiyada gaarka ah ee fiidiyowga! Dhab ahaantii qaybta aan ugu jeclahay barnaamijka.
Jecel barnaamijkan! Waxay ka dhigeysaa mid aad u fudud in loop-gayo heesaha aan jeclahay!
Lataliyaha dhaqaalaha, Amsterdam
Sida saxda ah waxaan ubaahanahay. Anigoo ah arday ah muusig muusig, waan dhageysan karaa heesaha Waxaan isku dayayaa inaan wax ku barto loop anigoo aan ku celcelin ciyaarista.
Waan jeclahay sida haddii fiidiyowga uu ka dheer yahay kan aad rabto, waad soo gaabin kartaa. WAAN KU HADAA. No dhalaalaya ama xayeysiis, uma arko sabab aan jacayl u ahayn.
Tani waa barnaamij weyn oo si sax ah u shaqeeya sida lagu sharaxay. Aad ayaan ugu faraxsanahay waana ku talin lahaa.
Muusikada aan jeclahay oo aan ku dhejiyo kabka ayaa i qancisa oo waxay iga caawisaa inaan is dejiyo.
Jeclow barnaamijkan waxbadan ayuu caawiyaa markaad ka heli weydo nooc dheereeya oo hees ah oo aad ka rabto YouTube-ka waad ku mahadsan tahay sameynta barnaamijkan.
Illaa iyo hadda, tani waa waxa saxda ah ee aan u baahnaa inaan ku go'doono oo aan ku dhaqmo qaybo ka mid ah gitaarka.
Cilmu-nafsiga, Rio De Janeiro
Waan ka mahadcelinayaa devs ee barnaamijkan layaabka leh, nasiib darro YouTube-na ma taageeraan muujinta loop laakiin waad ku mahadsan tahay sameynta barnaamijkan.
Architect network network, San Francisco
Way ku fiican tahay bilowgayaasha maadaama ay weydin karaan oo heesta si fudud bay u baran karaan
Waxay sifiican ugu shaqaysaa dhamaan fiidiyowyada oo aan ahayn muusikada kaliya.
Maareeyaha Maaliyadda, Florence
Waxay ku celcelisaa aniga oo aan joogsan si aan si fiican u seexdo
Makaanikada gawaarida, Toronto
Ku fiican khudbadaha luqadda iyo barashada sidoo kale. Waan xakamayn karaa xawaaraha ciyaarta ama xallinta.
Ku celi Youtube
Wadaagista websaydhkan ayaa dhiirrigelin u ah dalabka si loo horumariyo astaamo kale oo badan oo waxtar leh
© YouXube 2019 - Ciyaartoyda Youtube 0.0.1